TCDD iyo TÜDEMSAŞ Xero-hoygu ma noqon karaan albaab kirada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasTCDD iyo TUDEMSAS Goob joogtu ma noqon karto albaab kiro ah
19 / 03 / 2019 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
tcdd iyo hoyga tudemsas ma noqon karaan albaab kiro ah
Guddoomiyaha Udem Haksen Abdullah Peker wuxuu sheegay inay jiraan xarumo bulsheed iyo guryo 247 oo ay shaqaalaha TUDEMSAŞ ka faa iidaysan karaan iyo in “Shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha dawladda iyo ururkuba ay u dhaw yihiin goobaha shaqada, iyo qiyamka ay qaadanayaan hay’adda horumarisa dareenka lahaanshaha hay'addu inay sababto in la dhiso qiyam. Waxaa jira 55 kun oo hoy ah.
“Markii hore, iibinta 5 kun oo guryood ayaa u yimid ajandaha. Hagaajinta TCDD iyo TÜDEMSAŞ waa in laga saaraa ajandaha. TCDD iyo TUDEMSAS Guryaha waa hoyga adeega. Waxaan maqalnay in siyaasiyiinta qaar ay fiiriyaan guriga oo ay qorsheynayaan inay ugu adeegsadaan dano ganacsi. Waajibka siyaasiga waa inuu hormariyo gobolka uu ka tirsanyahay oo aan lagu galin hantida dadweynaha.
Guddoomiyaha Udem Haksen Abdullah Peker, Xarunta Tareenka Taariikhiga ah ee Sivas, 1 ayaa la xiri doonaa Abril, wuxuu yiri: Yüksel Sannadka soo socda ee Yüksel Speed ​​Train waxaa loo qorsheeyay in uu yimaado xarunta, si uu diyaar ugu noqdo shaqada la qaban doono, saldhigga ayaa lagu xiri doonaa adeegga la bartay. 8 waxaa loo qorsheeyay in la xidho muddo bil ah iyo xarunta waxaa bixin doona xarunta tareenka ee Bostankaya. Saldhiggu waa wadnaha Sivas. Halkan, nolosha halbeegayaashu way nool yihiin, laakiin sii wadida dardaaranka ganacsiga, ma aha in la burburiyo hoyga, mashaariicda sida jardiinada qaranku waxay dar dar gelin doontaa dariiqa saldhigga. Annaga oo ah urur shaqaale, waxaan diyaar u nahay inaan aqbalno qorshayaasha mustaqbalka ee isbedelka annagoo ku mataleyno magaalada isla markaana aan ka yeelno suurtagalnimada dhaqaale inaanan burburin. Waxaan qabnaa in shaqaalaha Tüdemsaş aan la dhibaateyn. Waxaan ku ogeysiineynaa dadweynaha in aan noqon doono kuwa raacaya howlaha loo baahan yahay sida UDEM haksen.
Mashruuc aad u weyn ayaa la dhisi doonaa meel ka mid ah hoyga hore ee TCDD
TCDD waxay ku tiirsaneyd rajada laga qabo guryo la'aanta
Tareenka Tareenka Taariikhiga ah ee Sivas
10 La Qaadsiiyo Dekedda Izmir
ama shuruudaha guryeynta waxaa loo sameeyaa si waafaqsan caddaalad caddaalad ah oo sharciga waafaqsan .. ama la iibiyay.